မိဘမေတ္တာ: October 2009
သစ်ပင်ကြီးသည် ခုတ်လှဲသူကို မလှဲမချင်း အရိပ်ဖြင့် အေးမြစေ၏။
နံ့သာတုန်းသည် မီးရှို့သူကို မကျွမ်းမချင်း အနံ့ဖြင့် မွှေးစေ၏။
သူတော်ကောင်းသည် မိမိကို ညှင်းဆဲသော သူကိုသော်လည်း မသေမချင်း အကျိုးဆောင်၏။
စာရေးသူ အညတြ (ခေတ္တ နယူးယောက်ခ်) No comments: .
. အညံ့ပန်း (ပတ္တမြားမြေ)
နယူးယောက် ကိုစရောက်စကပါ။ အသိတစ်ယောက်မှလည်းမရှိခဲ့ဘူး။ နယူးယောက်မြို့ နဲ့ ၇ နာရီ လောက်ကိုဘက်စ်ကားစီးပြီးသွားရတဲ့ နယူးယောက် upstate က မြို့လေး တစ်ခုကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ဗျာ။ အိမ်က ကျောင်းမဖွင့်ခင်တစ်ပတ်လောက်ကြိုပြီးပို့လိုက်တာဗျ။JFK လေဆိပ်ကဆင်းဆင်းပြီးခြင်း အဲဒီမြို့လေး ကုိသွားဖို့ (port authority bus terminal) ကိုတက္ကဆီ စီးပြီးသွားရတာပေ့ါဗျာ။ JFKလေဆိပ် ကနေ ဆို အဲဒီကားဂိတ်ကို ၄၅ မိနစ်လောက်ကြာတယ်ဗျ။
မပြောချင်ပါဘူးဗျာ။ တက္ကဆီကားဆရာက လူမည်းကောင် ဗျ။ အခုထိမှတ်မိသေးတယ်။ ဒီလူအရပ်ကနည်းတာမဟုတ်ဘူး။ အနည်းဆုံး ၆ပေ ၅လောက်ရှိတယ်။ လူကောင်ကကြီးပါတယ်ဆို စကားပြောတဲ့အသံကလည်းကျယ်လိုက်တာဗျာ မြန်မာပြည်က ငါးစိမ်းသည်တောင်ထိုင်ငိုသွားမယ်။ တက္ကဆီ ကတန်းစီပြီး တော့ ကိုယ့်အလှည့်ကျ စီးရတာဗျ။
ဟားဟားပြောလိုက်အုန်းမယ် နောက်တခုလောက် အဲဒီလိုတန်းစီတာက နေရာတိုင်းမှာဗျ။ စာကြည့်တိုက်၊ဆေးခန်း၊ ထမင်းဆိုင်၊ဘဏ်၊ရုပ်ရှင်ရုံတို့အစုံဘဲဗျာ။ကုန်ကုန်ပြောရရင်ဗျာ နောက်ဆုံးအိမ်သာ ကအစတန်းစီရတယ်။ ဒီတော့သတိတော့ထားပေါ့ဗျာ။ အိမ်သာတက်မယ်ဆိုကြိုကြိုတင်တင်သွားပေါ့။ ရန်ကုန်မှာလို လူလည်ကျပြီး တန်းစီတာကိုကျော်တာတို့၊နားလည်မှု့လေးလုပ်တာတို့ ဘာတို့လုပ်လို့လုံးဝမရဘူး။ လုပ်လို့ကတော့လား ဗျာ မြန်မာပြည်မှာမျိူးကြီး show ကို စပီကာနားမှာ သွားနားထောင်တာကမှ ခင်ဗျား နားကသက်တာအုန်းမယ်။နားကို အဲဒီလိုအထောင်းခံရတာ ခင်ဗျားအဲဒီနေရာကမထွက်သွားမခြင်းပေါ့ဗျာ။
အင်း...စကားဆက်လိုက်ပါအုန်းမယ်။ အဲဒီတော့ဗျာ လူမည်းကောင်ကြီးကားကိုမစီးချင်လို့ကိုမရဘူး။ သူ့နောက် က ကားဆရာတွေကလည်း လူမည်းတွေဘဲဗျ။ ဒီတော့ဗျာရှင်းရှင်းပြောရရင် အာဂသတ္တ်ိမွေးပြီးစီးလာခဲ့တယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာတော့ အင်းဒီကောင်ကြီး ငါ့ကို မဟုတ်တဲ့နေရာတွေများ ခေါ်သွားမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်စိတ်က တော့ အပြည့်ပေါ့ဗျ။ ကျွန်တော်ကံကောင်းပါတယ်။ တလမ်းလုံးဘုရားစာရွှတ်ပြီး လိုက်လာတာ လူမည်းကြီး က (port authority bus terminal) ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြဿနာတခုကဒီမှာစတော့တာဘဲ။ ကျွန်တော့် ရဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်တွေက အားလုံးပေါင်း ၄အိပ်ဗျာ။ လက်ကိုင်အိတ်က ၂အိတ် အားလုံးပေါင်းရင်၆အိတ်ဗျာ။ အဲဒါကုိဘယ်လိုသယ်တယ်အောက်မေ့လဲ။
မြန်မာပြည်ကဘဲဗျ။ ဒီလောက်တော့မညံ့ပါဘူး။လမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့ ရဲ ကိုသွားခေါ်လာပြီး အိတ်တွေကုိကြည့်ခိုင်းထားပြီး တစ်အိတ်ပြီး တစ်အိတ် မြေအောက်ထပ်၃လွှာကို သယ်တာပေါ့။ အဲဒီကားဂိတ်ကအကြီးကြီးဗျ။ မြန်မာပြည်က လေယာဉ်ကွင်းထက်၂ဆလောက်ပိုကြီးမယ်ထင်တာဘဲ။ ကျွန်တော်စီးရမယ့် ကားဂိတ်လေး က မြေအောက်ထပ်၃လွှာမှာ။ ကြုံတုန်းလေးထပ်ပြောလိုက်အုန်းမယ်။ နယူးယောက် က လူတွေအားလုံး က ကြွက်တွေနဲတူတူဘဲဗျ။ မြေအောက်ထပ်မှာနေကြတယ် မြေအောက်ထပ်မှာ ကားသွားစီးရတယ်။ မြေအောက်မှာဘဲ (subway) စီးရတယ်။မြေအောက်နဲ့ကိုမလွှတ်တော့ ကြွက်တွေနဲ့ထူးမခြားနားပါဘဲ။
အင်း.....အဲဒီလိုနဲ့ပေါ့ မင်းသားလေး ကျွန်တော်ကမျာမှာတော့ ကံကောင်းစွာနဲ့ ဘက်စ် ကားပေါ်ကို ရောက်သွားခဲ့တယ်။ ဒီင်္ဟာတွေကိုကြည့်ပြီး ဒါလေများလွယ်လိုက်တာလို့မပြောနဲ့နော်။ ကျွန်တော် ဒီလိုအလွယ်တကူဖြစ်အောင် ကျွန်တော့်အစ်မက မြန်မာပြည်မှာတုန်း ကရင်းမြေပုံတွေကြည့်။ တက္ကစီဘယ်လိုစီးရလဲဆိုတာ ကိုဟိုမေးဒီမေးလုပ် အစုံဘဲဗျာ။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု တွေလုပ်ခဲ့ရတာကိုပြောတာပါ။ ကျွန်တော်ကျောင်းတက်ရမယ့်မြို့လေးကိုလည်းရောက်ရော ပြောပြီးသားလေး ဗျာ တပတ်လောက်စောနေပါတယ်ဆို ကျောင်းမှာ (student advisor) တစ်ယောက်ဘဲရှိတယ်။ ဒါတောင် သူ့ကို ကျွန်တော့်အမကကြိုတင်ဖုန်းဆက်ပြီး ဘက်စ်ကားဂိတ်ကနေ ကျောင်းအရောက် ပို့ဆောင်ခ ကြိုပေးထားလို့။ မဟုတ်ရင်ဘယ်နားသွားအိပ်ရမလဲတောင်မသိဘူး။ ကျွန်တော်နေရတဲ့ ကျောင်း အဆောင် က ၉ ထပ်မှာဗျ။ အဲဒီ (advisor) ပေါ့ ကျွန်တော့်ကို အဆောင် က အခန်းရှေ့မှာချပြီး သူ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးပြီးထွက်သွားခဲ့တော့တာဘဲဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း အခန်းထဲမှာ ရှင်းလင်းရေးလုပ်ပြီး နေခဲ့တယ်။ အားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော့် ကိုကျွန်တော့်ဝမ်းဗိုက်က ဆန္ဒ တွေပြနေတာပေါ့။ ကွီးကွီး နဲ့အော်တာဗျာ ကျွန်တော့်ဘေးအခန်းမှာလူရှိရင်ကြားရမယ်ထင်တာဘဲ။ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်ရမလဲ (advisor) ကို ဖုန်းခေါ် ပြီးသူ့ကိုလှမ်းမေးတယ်။ ကျွန်တော်ဗိုက်ဆာလို့ ဘယ်မှာ စားသောက်ဆိုင်ရှိမလဲပေါ့ဗျာ။ သူ ကတော့သူသိသလောက်ပြောရှာပါတယ်။ ခက်တာက ဗျာကျွန်တော့်အကျင့်က ဗိုက်စာရင် ထ္မင်း မစားရရင် ကိုမနေနိုင် တာဘဲဗျ။ (asian) တွေစားတဲ့ထ္မင်းဆိုင်ကမရှိဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ တတ်နိုင်သလောက်ရှာတာဘဲဗျာ။ ဒါ့ပေမယ့် ဗျာ ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြီးဘဲဆုတောင်းတောင်း ဆန္ဒ ကမပြည့်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီနေ့က ဘီစကစ် မုန့်လေးစားပြီး ရေသောက် ဗိုက်မှောက် နေခဲ့ရတယ်ဗျ။ နောက်တနေ့ကျတော့ အပြင်ထွက်ပြီး ထ္မင်းဆိုင်ရှာတာပေါ့။ရှာပုံတော်ထွက်တာမြေဖြူနှစ်ချောင်းနဲ့၊လိပ်စာ စာရွက်နဲ့ပေါ့။ လမ်းထောင့်တွေရောက်တိုင်း တိုင်တွေမှာ မြန်မာလိုတွေရေးမှတ်ပြီး ဘယ်ကွေ့ညာကွေ့ အမှတ်အသားတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားကတော့ထင်မှာဘဲ ဒီလူပါးစပ်မပါဘူးနဲ့တူတယ်လို့။ ကျွန်တော်ပါးစပ်ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မေးရမယ့်လူတွေက တနေ့လုံးနေမှ ၂ ယောက်စ ၃ယောက်စဘဲရှိတာဗျ။ ဒီတော့သူတို့ကိုသွားမေးလဲသူတို့တွေက ကျွန်တော် လိုချင်တဲ့ အဖြေကိုမပေးခဲ့ပါဘူးဗျာ။ ဒီတော့ ကျွန်တော့််မှာ အမေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ လက်ဖက်တွေရယ်၊အကြော်ဆန်တွေရယ်၊ငါးပိထောင်းလေးရယ်ကို ဘီစကစ်တို့ ပေါင်မုန့်တို့မှာ သုတ်ပြီး တပါတ်လောက်စခန်းသွားခဲ့ရတော့တာပေါ့။တပါတ်လောက်ကြာမှ ကိုရီးယားတို့၊ဂျပန်တို့၊တရုပ်တို့ အစရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေရောက်လာမှ သူတို့နဲ့အတူလိုက်ပြီ ထမင်းအိုးတွေဝယ်ရတယ်ဗျာ။ ဆန်ရောင်းတဲ့နေရာလည်းတစ်မြို့လုံးမှာ တစ်ဆိုင်ဘဲရှိတယ်။ အဲဒီဆိုင်ကလည်း မန်ဘာဖွင့်ပြီး ဝယ်ရတာဆိုတော့ မန်ဘာကြေး တွေပေးရတာပေါ့ဗျာ။ နောက်မှစုံစမ်းလို့ သိရတာ အဲဒီမြို့တစ်မြို့လုံး မှာ (asian) စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဘဲမြို့လယ်ကောင်မှာရှိတယ်တဲ့ဗျာ။အင်း ဘာဘဲပြောပြောပေါ့ လက်ဖက်နဲ့ ပေါင်မုန့်ထည့်ပြီးစားကြည့်တာအိုကေပါတယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့လဲစမ်းပြီး စားကြည့်ကြပေါ့။ ကျွန်တော့်အကြောင်း ကိုဒီနေရာမှာခဏ နားအုန်းမယ်။ နောက်မှဆက်ပြောတာပေါ့ဗျာ။ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ပြီးအောင်ဖတ်ပေးတာ ကျေးဇူးဗျာ။ ကျွန်တော့်လိုအဖြစ်မျိုးမကြုံပါစေနဲ့လိုဆန္ဒပြုရင်း...
စာရေးသူ အညတြ (ခေတ္တ နယူးယောက်ခ်)4comments: .
မြင်တာ ဘာလဲ (စိတ်, တရားဘဲ)
ကြားတာ ဘာလဲ (စိတ်, တရားဘဲ)
နံတာ ဘာလဲ (စိတ်, တရားဘဲ)
စားတာ ဘာလဲ (စိတ်, တရားဘဲ)
တွေ့တာ ဘာလဲ (စိတ်, တရားဘဲ)
ကြံတာ ဘာလဲ (စိတ်, တရားဘဲ)
အမြင်ခံတာ ဘာလဲ (အဆင်း, ရုပ်တရားဘဲ)
အကြားခံတာ ဘာလဲ (အသံ, ရုပ်တရားဘဲ)
အနံခံတာ ဘာလဲ (အနံ့, ရုပ်တရားဘဲ)
အစားခံတာ ဘာလဲ (အရသာ, ရုပ်တရားဘဲ)
အတွေ့ခံတာ ဘာလဲ (အတွေ့ဓါတ်, ရုပ်တရားဘဲ)
အကြံခံတာ ဘာလဲ (ရုပ်,နာမ်နှစ်ပါး နိဗ္ဗာန် ပညတ် အကုန်ရ)
ရုပ်,နာမ်တရား နှစ်ပါးသာ ဖြစ်ကြကုန်၏။
ဖြစ်ပြီးပျက်တာ မမြဲပါ ရမှာ (အနိစ္စ) သာ
မမြဲဆိုကဆင်းရဲလှ (ဒုက္ခ) တစ်ပါးသာရ
မမြဲဆင်းရဲအလိုမကြ ဘာတစ်ခုမှ ငါမရ မုချ(အနတ္တ)
ရုပ်နာမ် တရား နှစ်ပါးလုံး နိစ္စ သုခ အတ္တ မရ
အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ ရ။
ရုပ်နာမ်တရားနှစ်ပါးလုံးသည် စင်စစ်ဆင်းရဲမှန်လှ ဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးပါတကား။
TIME IS GOLD.SO, DO YOUR BEST AND JUST DO IT NOW.
ပစ္စုပ္ပန် ၏ စက္ကန့်တိုင်း စက္ကန့်တိုင်း
အသိရော အကျင့်ပါ ပြည့်စုံလျှက်
ရလေ လိုလေ အိုတစ္ဆေ
ငယ်ငယ်တုန်းက ကလေးဘဝမှာ လူတိုင်း ဒီလိုကစားခဲ့ဘူးကြမှာပါ။
(ဒါဆုိညောင်ပင်တစ္ဆေ မှာ သူတယောက်တည်းအဖို့ နေစရာ၊စားစရာ၊သောက်စရာ အပြည့်အစုံပိုလျှံစွာ
ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ ခွဲဝေပေးရမှာ စိုးရိမ်တာကြောင့် ညောင်ပင်လာသူတိုင်းကို သူဟာ
ဒါကြောင့်ရလေလိုလေအိုတစ္ဆေ ဆိုတာ ဘယ်သောအခါမှာ ဖြည့်၍ မပြည့်နိုင်တဲ့ လောဘအိုးကြီးပါတကား။
စာရေးသူ အညတြ (ခေတ္တ နယူးယောက်ခ်) 1 comment: .
. အညံ့ပန်း ၏ အတွေးအမြင်
ယူးအက်စ်အေ ဒီဗီ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်
ယူးအက်စ်အေ ရဲ့ ၂၀၁၁ ကံစမ်းမဲ ကို (အောက်တိုဘာလ ၂ရက် ၂၀၀၉ မှ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် ၂၀၀၉ )ထိ တင်သွင်းကံစမ်းနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့တင်သွင်းရာတွင် သင်၏ဓါတ်ပုံမှာ အဓိက ကျပါသည်။ ဓါတ်ပုံ ၏လိုအပ်ချက်များကို အောက်ပါ ဆိုဒ်တွင်ကြည့်ရှူနိုင်သည်။
သင်၏နာမည်စာရင်းဖြင့်တစ်ကြ်ိမ်သာဖြည့်ခွင့်ရှိသည်။ သို့ပါ၍ သင်ဝင်ရောက် ကံမစမ်း ခင်တွင် သင်မရှင်းသည့် အကြောင်းအရာကို comment နေရာတွင်မေးမြန်းနိုင်သည်။ မိတ်ဆွေအားလုံးကံကောင်းကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါသည်။
ပစ္စုပန် ကိုလည်း မချော်နဲ့။
ပစ္စုပန်တိုင်းကို အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိ ရှင်သန်ပါ။
ပစ္စုပန်တိုင်း ကို နားလည်တာဝိပဿနာပါ။
အရှိ နဲ့ အသ်ိ ကိုက်ညီနေတာ
အဖြစ်နဲ့ အပျက်ကုိမြင်နေတာ ဝိပဿနာပါ။
ကျေးဇူးရှင် ကြောင်ပန်း ပဉ္စမ နာယက ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ သြဝါဒမှ
ဇာတိဘေးက ပြေးမရ တွေ့ကြ ဓမ္မတာ
ပြုရင်း ပြင်ရင်း စောင့်ရှောက်ရင်းက
အိုခြင်း တွေ့ကြ ကွင်းမရ
နာခြင်း တွေ့ကြ ကွင်းမရ
သြော်... ဇာတိ ဇာတိ ဇာတိ
ကျေးဇူးရှင် ကြောင်ပန်း ပဉ္စမ နာယက ဆရာတော် ဘုရားကြီး...